Karatra fandraharahana 50,000,000 XNUMX XNUMX! | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 19, 2009 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Raha mbola tsy nanana fotoana hijerena ireo minicards malaza an'i Moo ianao dia tena fitsaboana tokoa! Casey avy any MooshinIndy.com Nanana pirinty natao pirinty tamin'ny sariny mahafinaritra ary mampino izy ireo.
Vita avy amin'ny tahiry tsara izy ireo ary tena mahasarika ny masonao. Raha ny marina dia efa nivarotra izy ireo Karatra fandraharahana maherin'ny 50 tapitrisa avy any Moo ary natolotra izany tany amin'ny firenena 150 mahery!
moo izao dia manampy safidy vitsivitsy:
Mampakatra sary misy lafiny roa - ampidiro mora foana ny marika, ny logo ary ny volavolan'orinasa amin'ny lafiny roa sy aoriana amin'ny MiniCards, manitatra ny fahafaha-miasa azon'ity vokatra ity ampiasaina. Ohatra, Perch, orinasam-pitantanana votoaty an-tserasera, dia nanonta kaody fampiroboroboana tsy manam-paharoa amin'ny MiniCards tsirairay avy, ary namadika azy ireo ho fitaovana marketing mavitrika sy azo zahana.
Safidy fandaminana vaovao - Ny môdely, endritsoratra ary loko fanampiny dia manome safidy ho an'ny mpanjifa bebe kokoa amin'ny famolavolana ny karany, mitondra ny fanaingoana manokana an'i MOO amin'ny sehatra vaovao.
Fihenam-bidy - Miaraka amin'ny fonosana 400 vaovao, ny orinasa madinidinika dia afaka mividy habetsaky ny vola bebe kokoa hamaly ny filan'ny tambajotra ary hahazo fihenam-bidy.
Mpino mafy orina aho fa Ny karatra fandraharahana dia tsy tokony ho very maina amin'ny famolavolana mora vidy fotsiny atsipazo haingana izany raha vantany vao miverina any amin'ny birao ianao ary mampiditra ny info ao LinkedIn. Araraoty isaky ny mandefa karatra amin'ny vinavinanao manaraka ianao mba hanao fiheverana miavaka. Karatra fandraharahana MOO - $ 21.99 ho an'ny 50 Cards Business tsy manam-paharoa sy namboarina, samy manana endrika hafa ny tsirairay.
Ireo karatra fandraharahana novidiako vao haingana dia tena nahomby tokoa - nahazo hevitra aho isaky ny nizara azy ireo. Fa ny tena lehibe, mahazo valiny aho!
Tags: ny hevitra momba ny karatrakaratra fandraharahanaMookaratra moo
Marika lehibe mivoatra amin'ny fotoana